UDisemba uqala ukukhishwa kuNetflix ukuchitha impelasonto enhle | Izindaba zamagajethi
I-AEMET iyasixwayisa, kuzoba impelasonto enzima eSpain, izivunguvungu, izimvula namagagasi abandayo ahlasela yonke imvelo yenhlonipho njengenkemba ebulalayo. Ngalesi sizathu, sizokusiza ukuthi uchithe le mpelasonto enzima ngendlela elula ngangokunokwenzeka, ngama-premieres kaDisemba ka-Netflix, futhi kunezinto eziningi ezintsha ezingasivumela ukuba sihlale kusofa futhi sibe noshokoledi oshisayo ngenkathi i-Netflix yenza wonke umsebenzi owenzelwe thina, noma kungenjalo. Leli iqoqo elincane lokuhle kakhulu esingakuthola kuma-premieres kaDisemba kuNetflix.
Siya lapho nezindaba, zazo zonke izinhlobo nemibala, ngoba usuyazi vele ukuthi ku-Actualidad Gadget sithanda ukunakekela bonke abafundi bethu. Futhi-ke, uma wazi noma yimaphi ama-premieres akhangayo esiwaphuthelwe, zizwe ukhululekile ukuphawula ibhokisi lokuphawula, elenza okungaphezulu kokukhumbuza lo mhleli othobekile ngokungaphuthelwa kwakhe njalo (ihlaya elingenasihe ngoMgqibelo).
1 Ubuhlungu obukhulu
2 Inzalo kasathane
3 Intaba ebandayo
5 Kumnandi ukuphila
6 Umfana ogqoke izingubo zokulala ezinemigqa
7 Okunganqandeki Ukufuna Ukuzingela
Izolo bengifunda lesi siqophamazwi esiphelele kuwebhusayithi enezihloko zeNetflix: "Umzamo we-Nth wehlulekile ukuletha umlingiswa womdlalo wevidiyo odumile ebhayisikobho", futhi yileyo ndlela esethula ngayo kuwe. Kodwa-ke, uma ungumlandeli weSaga kaMax Paine, awukwazi ukuyiphuthelwa, noma ngabe ukugxeka ama-winks akhe amabi emdlalweni wevidiyo noma ukutshela abangani bakho endaweni yokucima ukoma ukuthi ama-movie wegeyimu wevidiyo ahamba kabi kangakanani, yebo abafundi bezincwadi bayakwenza , kungani abadlali bengadlali?
Ukwesaba okuncane ngathi, nokwakho. Le mini-series inamahora amane wokuqukethwe ivuliwe i-adaptation yefilimu yoqobo enophawu lwePokanski olubizwa Ingane kaRosemary. Maphakathi nendawo nokusola okungazelelwe nokwesaba, okunganconyelwe izingane ezingaphansi kweminyaka eyishumi nesishiyagalombili, masingalali ubusuku bunye.
Yini engase ihambe kabi kumlingisi we-movie uNicole Kidman othole uRenée Zellweger u-Oscar. Noma kunjalo, kuqondiswe ku-2003, Yifilimu ehlehlela emuva ku-1860 lapho sizothola khona uthando nemvelo emvelweni weMpi Yombango yaseMelika. Yiba muhle ngale movie, futhi, isihloko sinembile impela esikhathini sonyaka esizithola sikuso.
Quentin Tarantino noRobert Rodríguez, umlingisi omncane ongathanda cishe noma yimuphi umlingisi. Thatha uhambo lweSin City kusukela esandleni sika Bruce Willis, lokhu kuguqulwa kwamahlaya athandwayo agcine eba yi-cinema yakudala, futhi kunezinto ezimbalwa uTaratintino azithintayo ongeke ugcine uzithanda.
Siyaqhubeka nokudla okwakudala, le filimu yango-1997 isibuyisela eMpini Yezwe Yesibili, yile ndlela uRoberto Benigni azuze ngayo ama-Oscars angaphansi kwamabili ngobusuku obubodwa, ingqophamlando. Le filimu imayelana nokwenza ingane ikholelwe ukuthi ayikho ekamu lokuhlushwa, okuthile okufana nesici esiphambene ngokuphelele se-movie esizokwethulela sona ngokulandelayo.
Umfana ogqoke izingubo zokulala ezinemigqa
Ukulungiswa kwefilimu yencwadi eyaba yisihloko. Le ncwadi ifundeka kalula futhi imfishane, kepha-ke ifilimu ibikade iyindlela ephelele (into ethile abafundi bomlamu abasoze bayivuma). Umuntu ongamazi ubudlelwano bobungani obuxhuma indodana yenduna jikelele yamaNazi nengane yamaJuda evalelwe ekamu lokuhlushwaUkuphela, cishe okungenakugwenywa, kuyinto enzima kakhulu ukuyikholelwa, uhlobo oluphakathi nendawo phakathi kobulungiswa nokungabi nabulungisa ngokuphelele.
Okunganqandeki Ukufuna Ukuzingela
UMat Damon noBen Affleck baletha le ndaba yokuthuthuka empilweni okubuye kwazuza ne-Oscar, nendlela enhle yokukhumbula uRobin Williams omkhulu, idrama ethile yokuvala ntambama ngoMgqibelo noma ngeSonto.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » UDisemba uqala kwiNetflix ukuba nempelasonto enhle kakhulu
Chofoza lapha kusho
Sawubona kusihlwa! Ngingathanda ukunikela izithupha ezinkulu ngolwazi oluhle esinalo lapha kuleli sayithi. Ngizobuya ukuzokufunda nale webhusayithi kungekudala.
Phendula ukuze uchofoze lapha